Organic Oriri: Kedu ihe ha bụ? Olee uru ọ bara?
Thermogenic Sweat Swaat: Kedu ihe ọ bụ na otu esi eji ya?
Ngwurugwu okike: otu esi eme ya? Hụ usoro nri
Alimentos	 18 February 2016
Iri nri pụtara na ọ bụghị naanị iri nri kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị, kamakwa ịhọrọ ezigbo nri. N'echiche a, nri ndị sitere n'okirikiri na-abụkarị nhọrọ ndị na-achọ ụdị nri ọzọ dị mma na ahụike karị. Chọrọ ịmatakwu banyere isiokwu a? Ya mere, guo akwukwo ma hu ihe ha bu na uru ndia bara.
Organic nri niile bụ nri anaghị enwe nnyonye anya kemịkalụ ma ọ bụ mgbanwe mkpụrụ ndụ iji mee ka ha nwee ike iguzogide pests, dịka ọmụmaatụ.
Ya mere, nri ndị a enweghị ọgwụ na-egbu ahụhụ, homonụ, ihe ndị na-agbanwe ihe na mkpụrụ ndụ ihe nketa na fatịlaịza kemịkal. Na nkenke, ụdị nri a enweghị ihe ntinye ọ bụla nke na-esiteghị n'okike.
Kedu uru nke nri dị na nri?
Iri nri ndu bu ihe eserese nke gunyere ime ka ndu di nma n’ozuzu ya, ebe nri ndia nwere ike iweta uru di nkpa maka oriri na ahu ike. Otu n'ime uru ndị a bụ:
Mbelata nke oriri nke bekee
N’elu ọnọdụ ndị dị na ndepụta nke pesticide kasị ukwuu na-ere ahịa n’ụwa, Brazil na-erepịa ọgwụ ahụhụ, nke, ọ bụrụ na e kewaa ya n’etiti ndị bi na ya, ga-ebute ihe karịrị lita asaa n’onye ọ bụla bi na ya (7).
Ọ bụ ezie na nke a apụtaghị na ị na-etinye lita asaa ahụ niile, ọ bụ eziokwu na akụkụ pere mpe, agbanyeghị obere, gwụchara na sistemụ gị. Ebe ọ bụ na anaghị edozi ihe ndị a, afọ ole na ole ị nwere ike ị sufferụbiga mmanya ókè n'ihi na ị gbalịrị ịdị mma.
Site na nri ahịhịa, n'aka nke ọzọ, nke a anaghị eme ebe ọ bụ na ha enweghị ihe ntinye kemịkalụ kpamkpam, nke na-ebelata ntinye nke ihe ndị na-egbu egbu.
Ebelata ihe ize ndụ nke kansa
Kpọmkwem, gictù Ahụ Ike Worldwa (2) ghọtara ahịhịa na ahịhịa dị ka ndị ọrụ nwere ike bụrụ ihe egwu maka ọdịdị nke ọrịa kansa dị iche iche.
Nke a bụ tumadi n'ihi ọdịdị kemịkal nke ihe ndị a, nke na-eme ka ahụ nwee mmebi ma mepụta sel ọgbaghara, nke na-ebute etuto ọjọọ.
Yabụ, site n'iwe ihe oriri ị na-eri ihe ị belata ọrịa nke ọrịa kansa na-eme n'ihi ọnụnọ na nchịkọta nke ihe ndị a na ahụ gị.
Nwere ezigbo ekwukwa n'akwụkwọ uru
Ọ bụ ezie na esemokwu banyere ụdị nri nwere uru dị ukwuu na-edozi ahụ, ọ ga-ekwe omume ịsị na nri ndị nwere nri na-abawanye uru.
Nke a pụtara na mkpofu mineral na nri ndị osisi ndị a kpụrụ ma tinye obi ha dum na-eme ka ahụ dị mma karịa ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-adị ka ịsị, na ọ ka mma ma nwekwa uru dị mma iji rie kalori 200 nke karọt karịa calorie 200 nke chocolate.
Ọ bụ ezie na nke a bụkwa ajụjụ dịkarịsịrị onwe, gbalịa ịnụ ụtọ nri oge niile na ụdị nke organic. O yikarịrị ka ụdị nsụgharị ahụ ga-enweta ekpomeekpo maka gị ma pụta dị ka nke ọhụrụ, ihe okike na agụụ.
Na nke a, iri nri ndị na-edozi ahụ na-emekwa ka e nwekwuo nri dị mma maka uto ahụ, nke na-atọkwu ụtọ.
Organic nri bụ nri ndị na-enweghị mmiri ọgwụ na-egbu egbu ma na-egbu egbu, na-achọpụta uru ahụike dị mkpa. Na mgbakwunye na ịbelata nsị na ọrịa cancer, nri ndị a na-atọkwa ụtọ ma nwekwa uru bara uru karị. Yabụ, ọ bụrụ n’ịchọrọ nri ahụike karịa, echefula iche echiche iri nri ndị a.
Salad Ezi ntụziaka maka ndụ gị kwa ụbọchị
Osikapa na kọlịflawa: Chọpụta ma ọ bụrụ na ọ na-enyere gị aka ịkwụsị ibu ma hụ usoro kachasị mma!
Nri dị mma: Gịnị ka ụmụ nwanyị dị ime na ndị agadi kwesịrị iri? Ma ọ bụrụ na ifelata?
Usoro nri ndị anaghị eri anụ: Tinye nri ụtọ ndị a na menu gị!
Goji Pro - Goji Berry na Capsules